ပီးခဲ့တဲ့၂၀၁၉ တစ်နှစ်တာလုံး ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အမှတ်တရအကောင်း အဆိုးတွေကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ဖွေးဖွေး – GuGuGarGar
Shwe | January 2, 2020 | Cele | No Comments
ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ အနုပညာ အပေါ်ထားရှိတဲ့ စိတ်ကြောင့် ချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ပိုပိုပြီး များလာသူလေးဖြစ်တဲ့ ဖွေးစိန်လေးကတော့ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ အလှတရားကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလော မှာတော့ ဖွေးဖွေးက အခက်အခဲတွေနဲ့ရော အကောင်းဆုံးတွေ နဲ့ပါ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တုန်းက သူမရဲ့အကြောင်းတွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာတွေ့ ရပါတယ်။ အခက်အခဲတွေ ကြားထဲမှာတောင် ပြုံးနေနိုင်တဲ့ ဖွေးဖွေးကတော့ ပရိသတ်တွေ မထင်ထားရလောက်အောင် ကို စိတ်ဓာတ်မာသူလေး တစ်ဦပါပဲနော်။
ပရိသတ်တွေ အတွက် ၂၀၁၉ အမှတ်တရတွေကို ဝေမျှပေးခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဖွေးစိန်လေး ကတော့ “၂၀၁၉… not all but some memories of mine.. What’s Yours? အမှတ်တရတွေဟာ အမြဲတမ်းတော့ မလှပနိုင်ပါဘူး…ဒါဟာလဲ သဘာဝပါပဲ တင်နေကျပွဲ တက်ပုံတွေလို ဘဝဟာလဲ အမြဲ Perfect မဖြစ်နိုင်ပြန်ဘူး မဟုတ်လား… ? အဖြူပဲဖြစ်ဖြစ် အမဲပဲဖြစ်ဖြစ် အရောင်တွေကို စုဆောင်းနေတဲ့ လူတယောက် အဖို့တော့ တန်ဖိုးရှိနေတာပါပဲ… ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၂၀၁၉ ရေ…၂၀၂၀ အတွက်တော့ …..? 💎💎💎💎💎💎💎💎💎🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ကြည်နူး အန္တရာယ်ကင်းကြပါစေ Happy New Year 2020! Much Love xX ” ဆိုပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း သူမ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ လောကဓံတွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာ တင်ထားတာပါ။
ပရိသတ်တွေ စိတ်ပူမှာစိုးလို့ မပြခဲ့တဲ့ ကားမတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့တုန်းက ပုံရိပ်
၂၀၁၉ မှာ အရမ်းဂေါ်တဲ့ တက်တူး အသစ်လေးလဲ ထိုးခဲ့သေးတယ်နော်။
ဖွေးဖွေး ကတော့ အခုလက်ရှိ ရိုက်ကူးပြီးစီးသွားတဲ့ “ပုဂံမျှော်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ မြင့်မြတ်၊ မအေးသောင်း တို့နဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ စိတ်ထားကောင်းပြီး သူတစ်ပါးကို ကူညီတတ်တဲ့ဖွေးစိန်လေးကတော့ လူချစ်လူခင်ပေါတဲ့ ချစ်စရာ မင်းသမီးလေး တစ်ဦးဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ပရိသတ်တွေလည်း ဖွေးစိန်လေးတစ်ယောက် ၂၀၂၀မှာ ကံကောင်းပါစေလိ့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ Source:Phway Phway’s facebook
အားေပးတဲ့ပရိသတ္ေတြ စိတ္၀င္တစား သိခ်င္ေနတဲ့ မူးလာ ရဲ့ အခ်စ္ေရး
ေရခ်ိဳးဇလံုေလး ထဲက ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ ေရစိမ္ပုံရိပ္ေလးကို ေဝမွ်လိုက္တဲ့ အလွမယ္ ေ႐ႊအိမ္စည္